१ लिटर डिजेलको २ सय रुपैयाँ तिरेर चलाइन्छ यो सरकारी गाडी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
१ लिटर डिजेलको २ सय रुपैयाँ तिरेर चलाइन्छ यो सरकारी गाडी !
कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला सुदूरको पनि सुदूर र दुर्गमको पनि अति दुर्गम जिल्ला हो । अधिकांश सरकारी जागिरे डोल्पामा सरुवा हुन नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। सरकारी सुविधाको कुरा गर्दा त्यहाँ अरु त कुरै छाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि गाडी चढ्न पाउँदैनन्।
सर्वसाधारण पुराना जीप र ट्रयाक्टरमा थचारिँदै यात्रा गर्दा सिडिओ पनि उनीहरुकै हुलमा मिसिनु पर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यतालाई हालका प्रजिअ माधव ढकालले दुर गरेका छन् । डोल्पामा प्रजिअ ढकालले बुधबार खरानी रंगको बोलेरो जीप भित्र्याए।
‘म डोल्पा सरुवा हुने सूचना पाउँदा यहाँ गाडी छैन भन्ने थाहा थिएन’ प्रजिअ ढकालले भने ‘त्यसपछि म यहाँ आउनेबित्तिकै गाडी भित्र्याउने प्रयास गरे, फलस्वरुप ३ महिनापछि सेतो प्लेट भित्रिएको छ ।’
गाडी ल्याउन सफल भएपछि ढकालले गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिएका छन्।
ढकाल भन्छन् ‘आफ्नै सेवा सुविधाकालागि ल्यायो भन्लान् तर यो प्रशासनलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने मेरो प्रयास हो।’ अब एम्बुलेन्स भित्र्याउन अत्यावश्यक भएको उनले बताए।
डोल्पामा चल्ने मे १ झ १३५ नम्बरको बोलेरो यसअघि पाँचथरको प्रजिअले चढ्थे । उक्त बोलेरो गृह मन्त्रालयबाट २ ठाउँमा तुइनबाट तारिँदै ४ दिनपछि डोल्पा आइपुगेको सहायक प्रजिअ दिनेश शर्माले बताए । ‘पहिलो दिन सुर्खेत, दोस्रो दिन जाजरकोट, तेस्रो दिन रोल्पाको खगानपछि चौथो दिन यहाँ आइपुगेको छ’ शर्माले भने।
प्रशासन कार्यालयमा पुगेको बोलेरो सञ्चालन गर्न सहज भने छैन । पेट्रोल पम्प नहुँदा स्थानीयले ग्यालेनमा ल्याउने डिजेललाई कार्यालयले लिटरकै २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन्, ‘डिजेल महंगो छ, गाडीको सर्भिसिङ र मर्मत गर्न पनि मिस्त्री सुर्खेतबाट झिकाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’
डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढी भएकै कारण यात्रुहरुले १४ किलोमिटरको यात्रामा ८ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।